Maraykanka oo hakinaya shidaalkii uu siin jiray diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga – Puntlandtimes
Maraykanka oo hakinaya shidaalkii uu siin jiray diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga
Maraykanka ayaa sheegay inuu joojinayo shidaalkii uu hawada ku siin jiray diyaaradaha dagaalka ee Sucuudiga ee ka dagaalka ka wado Yemen.
Dhanka kale warbaahinta Maraykanka ayaa soo xigatay saraakiil Amerikaan ah oo sheegayo in maamulka Trump uu shaaca ka qaadayo inuu joojinayo adeegyadii dhanka militariga uu u fidin jiray Sucuudiga oo hoggaaminaya dagaalka diyaaradaha huwanta ay ka wadaan Yemen horraantii bishan ayay ahayd, markii Maraykanka uu ku baaqay in la joojiyo colaadda ka taagan yemen.
Qaramada Midoobe maxay ka tiri dagaalka Yemen?
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobe Antonio Guterres ayaa waxa uu ku baaqay in la soo afjaro qulqulatooyinka ka soconaya dalka Yemen, iyo weliba in si degdeg ah loo joojiyo dagaallada ka soconaya agagaarka goobaha muhiimka ah iyo weliba meelaha ay dadka badan ku nool yihiin.
Waxa uu sheegay in xaaladda bini’aadminimo ee dalkaasi ay aheyd mid quus ah ayna suuragal tahay inay isu bedesho macluushii ugu xumayd ee la rko muddo tobannaan sano ah hadaanan si degdeg ah wax looga qaban.
Carruurta Yemen ayaa gaajo iyo cuduro u dhimanaya iyadoo Qaramada Midoobe ay ka digtay in kala bar dadka dalkaasi ku nool ay halis soo wajahayso bilooyinka soo socda.
Maraykanka ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarrada Yemen ka socda, iyada oo ay dagaallada sokeeye oo seddex sano ka socday Yemen ay sababeen iney dalkaasi ka dhacaan macluushi bani aadaminimo ee ugu xumeeyd.
Wasiirka gaashaandhigga Maraykanka James Mattis ayaa sheegay dhinacyada isku hayo Yemen iney 30-ka maalmood ee soo socda gudhii ay ku billaabaan wada hadallo nabadeed oo dhibaatada Yemen ka taagan lagu soo afjaro.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa xulafada Sacuudiga uu hoggaaminayo ee dagaalka kula jira dhaqdhaqaaqa xuutiyiinta ugu baaqay iney joojiyaan duqeymaha dhinaca cirka ah ee ay ka sameeynayaan goobaha ay dadku ku badan yihiin.